माओवादी बैठक आज पनि स्थगित
काठमाडौं, मंसिर १ । पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ । पार्टी मूख्यालय पेरिस डाँडमा ११
मन्त्रीले घुस मागे
काठमाडौं, मंसिर १ । वनमन्त्री मोहम्मद वकिल मुसलमानले जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ)हरुको सरुवाको लागि १० लाख घुस मागेको एक दैनिक पत्रिकाले विश्वस्त स्रोतको आधार जनाउँदै घटनाको
पाँचथर, मंसिर १ । पाँचथरको मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि थर्पुबाट जाली लिएर च्याङथाफुतर्फ जाँदै गरेको मे१त १७१२ नम्बरको ट्रयाक्टर बुधबार दुर्घटना भएको जनाइएको छ । दुर्घटनामापरी तीन
बैद्य समूह शान्ति र संविधानको विपक्षमा : शिक्षमन्त्री
काठमाडौं , मंसिर १ । एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले आफ्नो पार्टीको मोहन बैद्य समूह शान्ति र संविधानको विपक्षमा रहेको बताएका छन्
भूकम्प पीडितलाई राहत, सरकारले घर बनाइदिने
काठमाडौं, मंसिर १ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भूकम्पपीडितका लागि घर बनाइदिन आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयले असोज १ गते
Date : 16 Nov 2011
राज्य पुनर्संरचना गर्ने दलहरुको निर्णयप्रति राप्रपा अध्यक्ष थापाको आपत्ती
काठमाडौ, कात्तिक ३० । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विशेषज्ञहरुको समिति बनाएर राज्य पुनर्संरचना गर्ने दलहरुको निर्णयप्रति आपत्ती प्रकट गर्नुभएको छ । पार्टीको
मातृका यादवको माओवादी विभाजन
काठमाडौ, कात्तिक ३० । मातृका यादवले नेतृत्वको नेकपा माओवादी विभाजित भएको छ । केन्द्रीय सदस्य दिलिप साहले आफ्नो नेतृत्वमा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरे
संविधान संसोधनप्रति वैद्य पक्षको आपत्ति
काठमाडौ, मंसिर १ । शीर्ष नेताहरुको बुधबार बिहान बसेको बैठकले अन्तरिम संविधानको ११ औँ संशोधनका लागि संविधानसभाबाट पारित गराउने विषयमा सहमति गरे पनि एमाओवादी वैद्य समूहले
दलहरुबीच संविधान संशोधन विधेक पारित गर्ने सहमति
काठमाडौं, कार्तिक ३० । शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयमा आज बसेको तीन दलको शीर्ष नेतृत्व बैठकले अन्तरिम संविधानको ११ औं संशोधन विधयेक प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति गरेको छ
आफ्नो अपहरण आफैं
काठमाडौं, कार्तिक ३० । कालीकोट घर भएका वीरेन्द्र शाहीले आफू अपहरणमा परेको नाटकगरी आफन्तबाट १० लाख रकम असुल्ने असफल प्रयास गरेका छन । राजधानीको रेडन कलेजमा
राष्ट्रपतिकै आफन्तको घरमा डकैती, अपराधी फरार
काठमाडौं, कार्तिक ३० । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवकी भतिजी रेखा यादवको घरमा बुधबार एकाविहानै डकैति भएको छ । डा. यादवकी भतिजी रेखा यादवको ललितपूरस्थित गुण कोलोनिमा
प्रधानमन्त्री पाखण्डी बने : खनाल
धनकुटा, कार्तिक ३० । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मितव्ययिताको नारा घन्काउने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर पाखण्डी बनेको बताएका छन् ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण तय
काठमाडौं, कार्तिक ३० । गणतान्त्रिक चीनका प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ ५ पुसदेखि तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबार बिहान
तीन दलको गोप्य सहमति, चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने
काठामाडौं, कार्तिक ३० । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्तिप्रक्रिया टुंगिएपछि चुनाब गराउने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने तीन दलको अनौपचारिक सहमति भएको बताएका छन् ।
नार हत्याकाण्ड, ६ जनालाई वीस वर्ष कैद फैसला
मनाङ, कार्तिक ३० । मनाङको नार हत्या काण्डको अभियोग लागेका चालिस जना मध्ये १९ जनालाई दोषी करार गर्दै मनाङ जिल्ला अदालतले मंगलबार कैद गर्ने फैसला सुनाएको छ
समायोजन प्रक्रियामा सामेल नहुन बैद्यपक्षको अपिल
काठमाडौं, कार्तिक २९ । एकीकृत माओवादीका बैद्यपक्षले शिविरका लडाकुहरुलाई पुर्नवर्गीकरण तथा समायोजन प्रक्रियामा सहमभागी नहुन आज एक अपिल जारी गरेको छ । अपमानजनक र शान्ति विरोधी एवं
राष्ट्रपतिलाई नागरिक सम्मान
विराटनगर, कार्तिक ३० । मोरङ ब्यापार संघले एक कार्यक्रमको आयोजनागरी मंगलबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई नागरिक सम्मान अर्पण गरेको छ । दुईदिने पूर्वाञ्चलमा भ्रमणमा निस्केका राष्ट्रपति यादव
'जम्बो'को निर्णय, भ्रष्टाचारमा मुछिएका तीन निलम्बित
काठमाडौं, कार्तिक ३० । भ्रष्टाचारका आरोप लागेका समाजकल्याण परिषदका उपाध्यक्ष दाताराम खनाल, कोषाध्यक्ष रत्नबहादुर गाहा मगर र सदस्य सचिव डा। छेवाङ नाम्गेललाई निलम्बित गर्ने निर्णय इतिहासकै
मंसिर पहिलो साता सम्ममा मेरै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, कार्तिक २९ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मंसिर पहिलो सातासम्ममा आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुने दाबी गरेका छन् । आज विहान प्रधानमन्त्रीको निवास
प्रधानमन्त्रीले नै सबै मन्त्री नचिन्ने
काठमाडौं, कार्तिक २९ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान मन्त्रीपरिषदका सम्पूर्ण मन्त्रीहरु आफैले नै नचिन्ने बताएका छन् । वर्तमान मन्त्रीपरिषदका सम्पूर्ण मन्त्रीहरुको परिचय र पृष्ठभूमी आफैलाई
मंसीर १४ सम्म लडाकुको पुर्नवर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरिने
काठमाडौं, कात्तिक २९ । सेना समायोजन विशेष समितिको सोमबार साँझ बसेको बैठकले माओवादी लडाकुको पुर्नवर्गीकरण मंसिर ३ बाट सुरुगरी मंसिर १४ सम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय पारित
सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्ने : कानूनविद्ध
काठमाडौं, कार्तिक २९ । कानूनविद्धहरुले बालकृष्ण ढुङगेललाई माफी दिने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्ने दावी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना
सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने : तीन दल
काठमाडौं, कार्तिक २९ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पहलमा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको तीन दलको बैठकले दलहरुबीच भएको ७ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, गच्छदारको सम्पत्ति सबैभन्दा बढी
काठमाडौं, कात्तिक २८ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले वर्तमान मन्त्रीपरिषदका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयमा विभिन्न मन्त्रीहरुले पेश गरेको सम्पत्ति
आज बस्ने भनेको माओवादी बैठक दुईदिनसम्मलाई स्थिगित
काठमाडौं, कात्तिक २९ । हिजो केहीबेर बसेर स्थगित भएको एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्ने भने ता पनि आज पनि बैठक बस्दै नबसी पर्सीसम्मका
आठ सहसचिवहरुको सरुवा
काठमाडौं, कार्तिक २९ । सरकारले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका आठ सहसचिवहरुको सरुवा गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठीले तीन ठूला आयोजना प्रमुख सहित
मलको सहज आपूर्ती गर्न माग गर्दै चक्काजाम
कैलाली, कात्तिक २८ । मलको सहज आपूर्ति गर्न माग गर्दै कैलालीका किसानले सोमबार पनि चक्कजाम कार्यक्रम जारी राखेका छन् । बाली लगाउने बेलामा मलको आपूर्ति सहज
भदौमा उम्रिएको च्याउले केही गदैन : ओली
कञ्चनपूर, कात्तिक २८ । नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार भदौमा उम्रिएको च्याउ जस्तै केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको
सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्ने : कानूनविद्
Pages 132 : You are at page 107 of 132